“Dhungannaa diinaarra, ciniinnaa saba koo naaf wayya!” | QEERROO
“Dhungannaa diinaarra, ciniinnaa saba koo naaf wayya!”
Posted on September 25, 2014 by Qeerroo
“Qeerroon: Abdii Biyyaa fi Wiirtuu Lafee dugdaa Oromiyaa ti!” Artist Caalaa Bultum
Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO): Fulbaana 23 bara 2014
Artistoonni Oromoo waa’ee eenyummaa fi aadaa Oromoo calaqqisuu fi guddisuurratti xiyyeeffachuudhaan hojjetan hiraara dabballoota wayyaaneetiif akka saaxilaman dargaggoon Oromoo Artist Caalaa Bultum gaaffii fi deebii iddoo jiru irraa SBO waliin taasiseen ibse. Uffannaa, callee fi faaya adda addaa aadaa fi eenyummaa Oromoo calaqqisu uffatanii hojiilee artii dhiyeessuu isaanitiin wellistoonni Oromoo hedduu rakkoon mudachuus ibse.
Dhalli Oromoo qayee isaarratti ajjeefamuu, qabeenya akaakilee fi abaabileen isaa dhaalchisanitti fayyadamuu odoo danda’uu mirgi isaa mootummaa wayyaaneetiin sarbamuurraa, jiruu gadadoof saaxilamuus gaaffii fi deebii kana keessatti dubbateera.
Lafti Oromoo warreen alagaa Itoophiyummaa leellisaniif ilaalchi godhameefii gatii rakashaan itti gurguramaa jiraachuu kan dubbate Artist Caalaa Bultum, rakkoo ummanni Oromoo keessa jiru kana ibsuudhaaf wallee isaa sirba Mormii maastar pilaanii magaalaa Finfinee fi diddaa barattootni/Qeerroon geggeessan ibsu kan “ Ka’i Qeerro ni kaanaa, ka’i Oromo ni kaanaa, diinatu daangaa darbee; Goobanaa Daancii lammaffaan argee…….Imaanaa abbaa hin nyaadhu, eenyummaa koo hin dagadhu, du’eetan bada malee biyya koo ormaa hin laadhu…” jedhu baasuu dubbateera. Kanarraas hiraara humnoota wayyaaneef affeeramuu dabaluun ifa godhe.
Wayyaaneen nama tokko akka garaa isaa guuttatee jiraatu gochuun ummata bal’aa ammoo beelessuudhaan beekamti kan jedhu wellisaa Caalaa Bultum, dabballoonni wayyaanee OPDOnni diinaaf ergamuun ummata Oromoo hiraarsaa fi safuu ummataa mulqaa jiru jedheera. Ajjeechaa humnoonni wayyaanee barattoota Oromoo irratti raawwatan innumti argee akka ragaatti kaasudhaanis, ajjeechaa dabalatee yakki mootummaan wayyaanee afaaniin waa’ee dimokraasii lallabaa ummata Oromoorratti raawwattu hedduu suukaneessaa tahuu fi sirnicha jalatti rakkoon ummata Oromoo ittuu hammaate malee jijjiiramni ummatichaaf dhufe homaatuu kan hin jirre tahuu dubbateera.
“Sochiin Qeerroo bilisummaa Oromoo wayta ammaa kana guutummaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru hedduu kan namatti toluu fi ummata Oromoo kan boonse” kan jedhe Artist Caalaa Bultum, warraaqsichi deggarsa ummata Oromoon dabaalamee finiinaa jiraachuu fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsudhaaf shoora ol’aanaa taphachaa akka jiru gaaffii fi deebii SBO waliin taasiseen ibseera.
Akkuma qotiyyoo qaluuf jedhan amooleedhaan sossobanii mooraatti galfatan, Qeerroon Oromoo sossobbiidhaan daguuf olola dabballoonni wayyaanee maqaa walgahiitiin oofaa jiraniin odoo hin dagaminii fi FDG irraa duubatti jechuu akka hin qabne hubachiise artist Caalaan. Fincilli Diddaa Garbummaa (FDG)n Oromiyaa keessatti barattoota sadarkaa 1ffaa hanga Yunvarsitiitti jiraniin deemaa jiru hedduu kan nama gammachiisuu dha kan jedhe wellisaa Caalaa Bultum hundumtuu harka walqabachuun barattootaa fi qeerroo Oromoo FDG irratti wareegaman, ilmaan Oromoo dirree falmaatti wareegamanii fi saba Oromoo barootaaf bilisummaaf wareegama baasaa jiruuf jecha diddaa gabrummaa akka finiinsan gaaffii fi deebii bakkuma jirurraa SBO waliin taasiseen dhaameera.
Gaaffii fi deebii dargaggoo Oromoo Artist Caalaa Bultum waliin taaisne sagantaa Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO) kan gara fuulduraa keessatti akka dhiyeessinu beeksisna.
1 thought on ““Dhungannaa diinaarra, ciniinnaa saba koo naaf wayya!””
Tesfu abebe on November 15, 2014 at 8:41 pm said:
mee jabaadha dargaggoota keenya qabsoon keenya duula mixiin qocaadhan waan dhagaa taatef qincee sijalatti uumuu qabna jedhaa turte haa goonu